AND SY HFI : Hidina eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai -
AccueilSongandinaAND SY HFI : Hidina eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai
AND SY HFI : Hidina eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai
Mbola tsy ampy an’ireo mpanao politika sasany ny fahasahiranam-bahoaka miha lalina amin’izao fotoana izao ka mbola tian’izy ireny hitarina hatrany ny krizy. Nilaza ny tsy hanaiky ny hanatanterahana ny fifidianana mantsy ny antoko AND tarihin’i Razafindravahy Edgar sy ny fikambanana Hetsika Fanarenana Ifotony (HFI) hivondronan’ireo mpanao politika mangidy hoditra eto amin’ny firenena, izany hoe ireo efa naloam-bahoaka. Hisy araka izany ny diabe efa ketrehin’izy ireo any ambadimbadika any hitarihana ny olona hanohitra ny hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena. Hatreto dia fampitahorana ihany no misy, satria ny resaka aloha no nalefa nialoha, fa ny daty kosa dia mbola tsy voafaritra hatramin’ny androany. Ny antoko Antoka sy Dinan’ny Nosy rahateo matanjaka ara-tserasera ahafahana mandefa resaka tsara hanakorontanana ny saim-bahoaka.
Mpijapy fotsiny koasa ireto mpanao politika efa lany daty toa an’i Pety Rakotoniaina sy ireo efa tsy nahazaka vahoaka hatramin’izao, amin’ny alalan’ny fanaovana ronono an-tavy sy ny kobaka am-bava eny amin’ireny haino aman-jery ireny. Raha ny nambaran’ny mpikambana sasany amin’ny HFI, dia ny hanohy ny fitokonana eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai no tena tanjona amin’izao diabe izao. Maro tamin’ireto mpanao politika ireto mantsy no nanantena ny ahazo seza tao anatin’ny governemanta vaovao, saingy nobahanan’ny Tim sy Mapar avokoa ny seza rehetra.
“Tsy ilay fanorenana ifotony akory no ratsy, fa efa tsy hatokisanay intsony ny sasany amin’ireo mpitarika azy noho izy ireny efa mpikarama an’ady politika nandritra ny fitondrana nifandimby” hoy kosa ireo olon-tsotra. Maro amin’izy ireo mantsy no efa nomena andraikitra goavana teto amin’ny firenena, nefa tsy nanao afa-tsy ny nameno paosy fotsiny. Manahy araka izany ireo mpomba azy sao hierina indray ny tranga toa ny nataon’ny Tim sy ny Mapar tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai farany teo manoloana izao hetsiky ny AND sy ny HFI izao. Sarotra mantsy ny mbola hinoana fa niova ho nadio tampoka teo izy ireo.